Ezumike 2015, osimiri kacha mma na Montenegro | Akụkọ Njem
N'oge okpomọkụ 2015, osimiri kachasị mma na Montenegro
Osimiri na Resorts | | Montenegro, Osimiri
Mgbe mgbidi Berlin dara na nhazi mpaghara ọwụwa anyanwụ Europe, ebe ndị njem ọhụụ na-apụta na map ahụ. Ma lee ebe aga! Dịka ọmụmaatụ, Balkans bụ ala mara mma, nke nwere ọdịdị dị egwu, ndị mmadụ mara mma, ọdịnala, nkà mmụta ihe ochie na ụsọ mmiri nrọ.
Montenegro bụ otu n'ime ebe kachasị ewu ewu na Balkan. Ruo oge ụfọdụ ugbu a, enwere ụgbọ elu ndị ọzọ ga-adị n'etiti isi obodo Europe na obere obodo Balkan a, kwa, ozugbo n'ime, ụgbọ elu mba na-eweta ọtụtụ narị ndị njem nleta gaa ebe ndị dị mkpa dị ka Svete Stefan, Petrovac, Budva ma ọ bụ Becici, dịka ọmụmaatụ. . N'ime afọ iri, Montenegro gosipụtara onwe ya dịka nnukwu ebe njem nleta, ọkachasị maka osimiri ya.
El udu mmiri na Montenegro bụ ihe yiri ya na ịsa ahụ, na nke a bụ naanị ndị ọzọ Osimiri Montenegro Ha nwere nkume ma obu okwute, mana ima nma ha karie nkasi obi. The osimiri nke Sveti Stefan kwuru Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu, ọ bụ eziokwu. Ọ bụ ihe iconic saịtị, a ochie obodo na-acha ọbara ọbara taịl nile, kristal doro anya mmiri, ájá. N'ihi ya, ọtụtụ ndị. PetrovacN'aka nke ọzọ, ọ bụ ebe ezumike ezinụlọ na-enwe mmekọrịta, obodo mara mma nke dị n'ụsọ osimiri na ụfọdụ agwaetiti ndị nwere okwute n'ime mmiri, ájá na-acha ọbara ọbara na ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ nri iji tufuo onwe gị ruo ọtụtụ awa.
Ulcinj, dị nso na ókèala, bụ ihe ọzọ. Ọbịaru a na-eweta ụtọ na ụda ọhụụ na enwere ọtụtụ ndị ọbịa si Albania na Kosovo. Na mgbakwunye, ọ nwere nnukwu ọdịbendị nke Alakụba ka ndị bikinis na-aga na ụlọ alakụba minarets. Obodo ọzọ dị n'ụsọ oké osimiri, nke dị obere karị Rose Ọ dị na njedebe nke ala mmiri Lustica na enweghị ndị ọbịa ọ bụla. Mmiri ahụ doro anya, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmiri, ị nwedịrị ike ịbanye mmiri. N'ezie, enweghị ụsọ mmiri aja, mana nyiwe ndị na-arụ ọrụ dị ka ebe ezumike anyanwụ na trampolines (foto).
Osimiri prznoGhara inwe mgbagwoju anya na Budva, ọ di na mmiri tupu Osimiri Kotor, ọ bụ naanị Montenegrin na-eleta ya. Mmiri dị jụụ, dị ala, ájá dị ọcha ma na-adọta ọtụtụ ezinụlọ. Enwere ụfọdụ ndo, tebụl picnic na ebe a na-ere nri. O nwere ikuku nke ebe ufodu. N'ikpeazụ, na mmiri n'ụsọ oké osimiri bụ Osimiri Drobni Pijesak, ugwu di ka ebe azu. Ọ na-akawanye arụ, nwee okwute ọcha na ọhịa dị n'akụkụ ya. A na-enweta ya site n'ije ije n'ihi na ọ dị anya site n'okporo ụzọ ahụ, nke na-echebe ya n'ikpeazụ.
Ndị a abụghị nanị Osimiri Montenegro ma n’ezie anyị nwere ike ịgụta ha n’etiti ndị kachasị mma. Buru ha n'uche nke a N'oge okpomọkụ 2015.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Montenegro » N'oge okpomọkụ 2015, osimiri kachasị mma na Montenegro
Ozi na Blue Flag osimiri (II)
Hotel W Hong Kong, ịdị mma na ezi echiche